Betwinner : Helitaanka iyo Faallooyinka
[email protected] | +44 203 9362996 | Taageero Rog-saac ah
Betwinner : goobta rasmiga ah
Betwinner waa qoraa buug cusub. Goobta rasmiga ah waxay leedahay midabyo wacan, casri, interface la fahmi karo oo ku habboon. betwinner ugu weyn ee loo soo dhaweynayo ciyaartoy cusub (illaa 100 $) iyo taageerada saacad-wareega ah waxay ka dhigayaan betwinner mid ka mid ah badeecadaha sharadka ugu fiican.
Nasiib darrose, maanta aad bay u adag tahay in la helo astaan lagu kalsoonaan karo oo suuqa ka jirta oo ah waxyaabaha khiyaameeya oo aan khiyaanayn doonin cayaaryahanka. Xidhitaanka joogtada ah ee akoonada, gooya qiyaasta ugu badnaan iyo codsiyada dhamaan noocyada dukumintiga markii lacag bixinta la wareeray waxay sumcad u ahayd suuq geynta ciyaaraha. BetWinner wuxuu ka BetWinner dhammaan dhaqannadii duugga ahaa. Waxaan xiiseyneynaa isticmaalaha alaabadayada - ciyaaryahanka. Sidaa darteed, waxaan wax walba u qabannaa si ku habooneyn ah khiyaanada khiyaanooyinka.
Betwinner si loo helo xiriir shaqo oo ku habboon goobta
Mid ka mid ah faa'iidooyinka BetWinner waa muraayaddeeda, oo aan waligeed la BetWinner . Waad geli kartaa goobta rasmiga ah adigoon wax dhibaato ah qabin adigoo si fudud u galinaya ereyga " betwinner " mashiinka raadinta. Laga soo bilaabo natiijooyinka raadinta ugu horeysa, waxaad aadi kartaa nooca shaqada ee bogga, halka badeecadaha kale aad si joogto ah u raadin doonto xiriir iskuxiran si aad u sameyso sharad.
Isku xirka Betwiner had iyo jeer wuu shaqeeyaa. Waxaan u sameyneynaa nooc gaar ah oo goobta ah shaqsiyaadkasta oo ka mid ah ciyaartoydeena si aadan dhibaato ugu qabin gelitaanka. Intaa waxaa sii dheer, waad isticmaali kartaa arjiga taleefanka gacanta, halka aad ku nooshahay qaab toos ah isla markaaba waxaad awood u yeelan doontaa inaad gasho akownkaaga barta.
Ku soo dejiso betwinner taleefankaaga
Waxaan daryeeleynaa dhaqdhaqaaqa alaabadayada. Waxaad u isticmaali kartaa betwinner noocyo kala duwan ah: kiniinno, laptops, kombiyuutar, biraawsar TV-ga ku jira. Waxaan soo saarnay codsiyada mobilada ee noocyada soo socda:
Codsiga Android (apk)
IPhone App (macruufka)
Codsashada kumbuyuutarrada iyo laptop-yada (Windows)
Betwinner ee Android
Barnaamijka betwinner ee loogu talagalay android qaab qaab ayaa loo heli karaa si looga soo dejiyo nooca rasmiga ah ee bogga. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad aado goobta. Dhinaca midig ee astaanta waxaad ku arki doontaa badhan "codsi casri ah." Raac tilmaamaha ku yaal bogga oo isticmaal xiriiriyeyaasha soo degsan.
Faylka arjiga ayaa loo habeeyay dhammaan cabirrada iyo noocyada aaladda. Waxay macnaheedu tahay inaad ku rakibi karto betwinner kaliya ma aha taleefankaaga android, laakiin sidoo kale kiniinigaaga iyo TV-gaaga.
Tilmaamaha loogu talagalay ku rakibidda barnaamijka betwinner ee iPhone wax farqi ah kuma lahan barashada taleefanka android. Dhamaan isku mid ah - riix batoonka "arjiga casriga ah" ee ku xigta sumadda oo raac tilmaamaha.
Halkaan waxaa looga adeegsan karaa oo keliya taleefannada casriga ah ee tufaaxa. Ma quseeyo aaladaha kale, sida imac iyo macbook. U adeegso nooca shabakadda qalabkaan.
Mid ka mid ah weydiimaha soo noqnoqda ee matoorrada raadinta waa Betwinner gudbinta Betwinner . Maxay siisaa Maxaa loogu baahan yahay? Nambarka xayeysiinta waxaa la geliyaa inta lagu jiro diiwaangelinta daaqad gaar ah. Ku tiirsanaanta koodhka gaarka ah ee xayeysiinta, waxaa lagu siinayaa nooc gaar ah oo gunno ah - waxay noqon kartaa freebet, gunno dhigaalkaaga ugu horreeya, sharad bilaash ah ama xoogaa kale oo gunno ah.Hoos waxaan ku soo betwinner dhammaan noocyada gunnooyinka loogu talagalay biloowga waxaanan ku wada betwinner hal betwinner dhiirrigelinta betwinner .
Noocyada gunnooyinka Cabbirka gunnada Betwinner promocode
Lacagta Debaajiga Koowaad ilaa 100 $ (100%) BETW1N
Khamaar bilaash ah ilaa 100 $ (100%) BETW1N
Caymiska sharadka ilaa 50 $ (100%) BETW1N
Slot mashiinka Slot (khamaar bilaash ah) ilaa 25 $ (100%) BETW1N
Toto ilaa 25 $ ₽ (100%) BETW1N
Khamaar ilaa 25 $ (100%) BETW1N
Nambarka xayeysiintu wuxuu u shaqeeyaa dhammaan noocyada gunooyinka diiwaangelinta. Kaliya gal gal si aad u hesho gunno oo aad bilawdid sharad ku saabsan dhacdooyinka isboorti. Sidoo kale ogsoonow inay jiraan boosas u banaan rukhsad oo khaas ah iyo qolal khamaar oo ay leeyihiin kuwa ka ganacsada nolosha.
Betwinner - gal diiwaangelinta iyo diiwaangelinta websaydhka rasmiga ah
Betwinner waxay leedahay muuqaal furan oo la adeegsan karo. Waxaan isku daynay inaan fududeynno intii suurtogal ah dhammaan howlaha. Haddii aad dhib ku qabtid diiwaangelinta ama gelitaanka =, marwalba waad nala soo xiriiri kartaa. Waxaan kuu shaqeynaa ku dhawaad saacad adiga oo diyaar u ah inaan ka jawaabno dhammaan su'aalahaaga sida ugu dhaqsaha badan.
Hawsha isdiiwaangelinta ayaa si fudud loo fududeeyay, oo xitaa waxay leedahay hab diiwaangelin ah sida "hal guji diiwaangelinta”. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad geliso nambarka taleefanka, oo aad ku hesho magac isticmaale iyo eray sir ah. Hababka kale ee isdiiwaangalinta ayaa hoos ku yaal
Diiwaangelinta shabakadaha bulshada iyo fariimaha (oo ay ku jiraan whatsapp iyo telegram)
Sidii aan horayba u soo sheegnay, Betwinner wuxuu leeyahay Betwinner fara badan oo kaladuwan - oo ka mid ah gunooyinka ugu horreeya ee deebaajiga ciyaartoy kasta oo cusub, sharad bilaash ah, caymis sharad, koodh xayeysiinta sharafta leh. Waxaad had iyo jeer ka ogaan kartaa xayeysiinta hadda ka jirta qaybta websaydhka "Xayeysiinta".
Qeybta PROMO waxaa loogu talagalay bilawga iyo ciyaartoy khibrad leh. Halkan waxaad had iyo jeer ka heli kartaa ciyaaro gunno ah, dalacsiinno ugu dambeysay, macluumaad ku saabsan dukaanka tiirarka xayeysiinta iyo dhacdooyinka ugu dambeeyay ee xayeysiinta la xiriira. Haddii aad dhib ku qabtid sidii aad ku heli lahayd gunooyin iyo dalacsiin goobta, waxaad had iyo jeer la xiriiri kartaa kooxda taageerada. Wey kaa jawaabi doonaan oo kaa caawin doonaan su'aalahaaga oo dhan.
Betwinner u eegista Betwinner
Aad ayey muhiim u tahay in macluumaad laga helo ciyaartoy kale oo khibrad leh iyo ilo sumcad leh oo nagu saabsan. Miyay jecel yihiin inay la shaqeeyaan badeecadeenna? Miyay helayaan macallimiinta iyo faa'iido darrooyinka Betwinner . Halkan waxaan ku soo aruurinay dib u eegista ugu caansan ee kaa caawin doona inaad fahanto awooda shirkadeena sharadka.
Buug lagu kalsoonaan karo Muddo sanad ah ayaan ciyaarayay, wax dhib ah malahan.
Heer sare ah. Taageeradu si dhakhso leh ayey u shaqeysaa, xariiqa waa balaaran yahay, isweydaarsigu waa wanaagsan yahay. Xaqiijinta si dhakhso leh ayey u dhaaftay dhib la'aan. Waan jeclahay wax walba.
Koontada ayaa inbadan la isticmaali jiray. Toddobaadkii la soo dhaafay, waxaan ku deeqay 25 $ halkaas, iyaga oo ku kordhiyey 73 $. Intaa kadib waxaan helay codsi dukumiinti ah. taageerada xafiiska boostada ayaa si dhakhso leh ugu jawaabtay. kaliya sababta oo ah khaladkayga (ma ahan tayada sawirka oo wanaagsan) waxaa jiray dib u dhac ku yimid gudbinta xaqiijinta. Waqtiga sugitaanka, waxaan ku guuleystay 760 $ (qiyaastii maalin gudaheed). Ugu dambayntiina markii ay ansixiyaan dokumintiyadii ayaan helay lacagtaydii. Waxaan ka gooyay lacagtii koontada oo dhan, ma jirin beddello khamaar ah, ma jirin betwinner kale oo taban, mahadsanid betwinner . haddii aysan ahaan lahayn doqonnada la jeexjeexay iyo ugu badnaan aakhirka, waxay noqon lahayd xitaa wax cajiib ah in la sii wado buug-yarahan lagu kalsoonaan karo
Ma haysataa wax aad tidhaahdo Tag bogga hore ee buug-qorayaasha, oo ku dheji fikirkaaga. Waxaan ka shaqeynay sumcad iyo xallinta arrimaha oo dhan.
BETWINNER (oo uu qoray Marikit Holdings Ltd. HE351206), Chrysanthou Mylona 12, Dhismaha Harmonia, dhisme 1, dabaq / xafiiska 15, 3030 Limassol, Qubrus.
BETWINNER waxay isticmaashaa buskud. Haddii aad sii joogtid websaydhka, waad ku raacsan tahay bayaankan.Faahfaahin intaa ka badan kala soco